Many Bamas are swallowing the hook, line, and sinker | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« General Aung San’s words are still relevant
Daw Aung San Suu Kyi and NLD should stop wasting time quarelling for minor things »
Many Bamas are swallowing the hook, line, and sinker
Widespread Islamophobic Hate Speeches in Myanmar
The whole world is watching the so called Democratization process of Myanmar shaping progressively albeit ataslow pace. But the whole world failed to understand that most of the Myanmars never really wish to practiceatrue Democracy based on Equal Rights for all the citizens, regardless of race and religion. They even fail to realize that they are just wishing in their hearts and minds to establishaBama Buddhist Empire lording over all the Ethnic Minorities and Religious Minorities. Ethnic Bama Buddhists do not wish to compete with the Ethnic and Religious Minorities on the level playing field.
Just think deeply about the following truths:
Most of the Petroleum, Gas, Minerals, and Jades etc are in the Ethnic Minority areas and if they are given autonomy what will be left much for Bamas?
If they gave EQUAL RIGHTS to Burmese-Chinese, Burmese Muslims, Rohingyas etc Bamas would be handicapped in economy.
Religious freedom to Minority Religious Groups: Christians, Muslims and Hindu etc….would jeopardize the upper hand they are taking in all the fields.
On top of those basic facts, most of the Burmese (Buddhist Bamas of Myanmar) on both side of political divide could not hide the feelings of deep seated hatred and antagonism i.e. Islamophobia toward all the Muslims in Myanmar.
Copies of the 120 page long Anti-Muslim booklets which are titled, ‘We are afraid that our race will disappear’ and “Burmese Citizens Beware!” pamphlets are distributed repeated everywhere in most parts of Myanmar nowadays.
“… Malaysia and Indonesia were once Buddhist countries in history (Sic), but unfortunately the Muslims used (their) methods (to expand their religion) so successfully that they have become Muslim (dominated) countries; Buddhism has disappeared from these countries…. Bear in mind that the four social causes of the Myanmar Military must be accomplished….”
It continues to accuse the Muslims in Myanmar with long chronology of alleged crimes and faults against Bama Buddhists. Inaflick of the slick magician’s hand, strong and powerful majority Bamas are portrayed effectively as victims of systemic attacks and schemes ofaminority Muslims.
Burmese Citizens – Beware!
The Muslims living in Burma are attempting to expand their religion while destroying Buddhism in Burma by using the following ways:
1) Land: All the land in the country shall be owned by the Muslims.
2) Money: To organize Buddhists to become Muslims using the power of money.
3) Women: To organize Buddhist women to get married with Muslims using money and other ways.
4) Doctrine: To preach Muslim doctrine in every place.
5) State power: After successfully using the above stated methods and when [the] majority of the people become Muslim, to take state power.
Although some educated people now understand that these pamphlets are meant to incite unrest to divert the attention on political and economic problems and to be able to cling on to the power by the military dictators, many common people still usually fall for them and the damage done leaves an indelible black mark on the politico-social, religious and race relation history of Burma or Myanmar.
President U Thein Sein and Daw Aung San Suu Kyi led NLD failed to stop or even ignore their duty to denounce these Islamophobic propaganda. Daw Suu just sent out the statement requesting both side to stop fighting without acknowledging that Muslims are victims.
Perhaps most upsetting to Bama Buddhists is the idea of Muslim men marrying Bama (Buddhist) women and converting them to Islam. Throughout military rule in Burma, successive regimes have used the spectre ofaMuslim takeover to whip up nationalist sentiments. In particular, when anti-regime tensions are running high, the military rulers staged-incidents of intolerable behavior by Muslims always seem to pop up and are used to channel anger into communal conflicts effectively diverting the main issue or problems.
There also included instructions to local people not to buy goods or dine in Muslim shops and restaurants.
1) People are told not to buy things at Muslim shops. They are advised not to eat or buy from shops with 786, Bismillah or Halal logos or those own by Kalars (Muslims).
2) They must not trade with Muslims.
3) People are not allowed to rent houses and land to Muslims.
4) Shops are told to display the logo ‘ARAHAN’ – Symbol of Buddhism or 969 logos.
5) People must not buy things from the shops that do not have the above logos.
(The above is the excerpts from the anti-Muslim pamphlets in Burmese which are distributed in Yangon, Mandalay and many areas in Myanmar.)
The 969 groups are openly selling or sometimes distributing the copies of that book and some tapes and pamphlets made from the gist of that book. Radical 969 Bamas distribute them to many Buddhist monasteries throughout the country. The government is also doing nothing about it and seems to agree with them.
The whole book is written to demonstrate the anti-Muslim sentiment existing in Buddhists and the authorities turningablind eye, although realizing that this had lead to very dangerous and disastrous consequences and the pressure in Myanmar-boiler is increasing daily and ready to explode. Although the Hardliners and Ultra-Nationalists affiliated to the military and government are doingavigorous propaganda campaign throughout the country obviously wishing to derail the present democratization process but it is mind bogging to witness many seemingly Democratic activists, including the professionals and the prominent monks and especially most of the NLD leaders and members are seen to be swallowing the hook, line, and sinker of Islamophobic Propangada.
1. HUMAN RIGHTS YEARBOOK 1999-2000: BURMA Page HRDU 229
Muslims in Burma have been regularly denied the right to freedom of religion. They have also been subject to various forms of persecution and discrimination. There were credible reports that in early 1999 anti-Islamic booklets were widely distributed throughout the country through the USDA,aSPDC-sponsored mass organization. The All Burma Young Monks Association (ABYMU) denied military allegations that they had printed and distributed the booklets. The reports of these booklets followed other reports in recent years of SPDC’s instigation or toleration of violence against Muslims. These booklets didn’t indicate where they were printed or who wrote them, but they sharedabasic message: Muslims are about to subvert all other religions. The anti-Muslim booklets explain how this had happened in Iraq and Indonesia, and how Muslims in Burma are about to turn the country into an Islamic state. During the widespread distribution of these pamphlets, communal riots were in Myinggyan, Myinmu, Myanaung and Tarmwe(Rangoon). It has been noted by some in Burma that in the past, Muslim people have been made the scapegoats for the government’s economic failures, and the resulting religious conflicts distracted people from these failures.
2. As Human Rights Watch reported in its 2001 report, “Crackdown on Burmese Muslims”, monks, working with the support of the government, have distributed anti-Muslim pamphlets such as the 2001 tract “Myo Pyauk Hmar Soe Kyauk Hla Tai (The Fear of Losing One’s Race). Distribution of the pamphlets was also facilitated by the Union of Solidarity and Development Association (USDA). The USDA is the civilian support wing of the military regime,
While the idea of monks actually leading rioters may seem unusual, certain details make it less so. Myanmar’s large and much feared military intelligence service, the Directorate of Defense Security Intelligence is commonly believed to have agents working within the monkhood. The monks have always been courageous supporters of the democracy movement. It would seem that monitoring dissident monks is not their only function.
Human Rights Watch also reported that monks in the 2001 riots were carrying mobile phones,aluxury not readily available to the Myanmar population – as very few without government connections can afford them. It is also reported that there wasaclear split between monks who provoked violence and those who did not. It has been suggested by Human Rights Watch and others that these facts may reflect the presence of agent provocateurs among the monks. That suggestion may not be far off.
If violence does once again break out, it will be agitators at the lead. And this religious violence threatens to divert the world’s attention from the real issue in Myanmar – the continuing deprivation of its people’s prosperity by an unpopular military dictatorship.
Burma hasalong and unfortunate history of discrimination against its Muslim citizens. With precedents for communal violence set in the past, the State Law and Order Restoration Council (SLORC) have found it expedient on numerous occasions to exploit religious and ethnic tension, especially when it can be directed towards Muslim people, to divide the public and distract attention from other political and social issues.
Muslims were explicitly targeted for persecution. Acts of violence, destruction, and sacrilege perpetrated by SLORC soldiers against Burmese Muslims. For instance, in July 1988, pamphlets supposedly written by Muslims encouraging fellow Muslims to marry Burmese women suddenly appeared in Taunggyi and other towns where anti-military feelings were growing after the student demonstrations in Rangoon. As expected, Muslim-Buddhist conflicts broke out, and the stores and homes of Muslims were attacked and looted. Such pamphlets have shown up several times in Burma over the past ten years, including in October 1996 in Rangoon, when Islamophobic pamphlets appeared.
3. Ref: Myanmar’s Muslim sideshow By Cem Ozturk. ASIA TIMES ONLINE
4. Religious Freedom Reports of US State Department.
Author: Dr. Abdul Rahman Zafrudin. Human Rights Activist and General Practitioner ataPrivate Clinic , born in Myanmar and now residing in Malaysia.
The hate speech threat to the 2020 election
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ခြိမ်းခြောက်လာနိုင်တဲ့ အမုန်းဝါဒဖြန့်မှုကို အာဏာရပါတီ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲ
Tags: Aung San Suu Kyi, Bama, Buddhism, Burma, Islam, Islam in Burma, Muslim, Myanmar
This entry was posted on April 23, 2012 at 10:16 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
22 Responses to “Many Bamas are swallowing the hook, line, and sinker”
April 23, 2012 at 1:17 pm | Reply
This isatrue fact what was and is happening in Burma. We muslims are like sand bags for practising Karate and boxing.
April 24, 2012 at 5:49 am | Reply
U Aungzaw Win commented: NLD ထဲမှာရော၊ ဘာသာရေးလောက ထဲမှာပါ BCP cell တွေမြှုပ်နှံထားပါတယ်၊၊ အခုချိန်မှာ အင်နဲ့အားနဲ့ ခေါင်းထောင်နေပါတယ်၊၊
အမှောင့်သတင်း ဖြန့်ချိပြီး Steering လုပ်နေပါတယ်။
တကယ် တမ်းမြန်မာ နိုင်ငံ ကို ကျွန်ပြုလွှမ်းမိုး မှုတွေ ကို ထောက်မပြ ရဲ ကြပါ၊၊
လိုင်းမတင်ရဲပါ၊၊ အဲ ဒီလူ တွေ ဘယ်လိုစော်ကားစော်ကား၊မိန်း​ကလေးတွေကို
ဖျက်ဆီး၊အရောင်းဝယ်လုပ်၊အဓမ္မ မှုတွေဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် သတင်းမဖွပါ။
BCP ကို ပန့်ပိုး ခဲ့သူ နိုင်ငံကြီးက BCP ကို ငယ် နိုင်ကိုင် ထားနိုင်ပုံရပါတယ်။
မြောင်းထဲ ရောက်နေတဲ့ ကုလားတစေ ကို လက်ညှိုးထိုး လမ်းလွှဲထားပါတယ်၊၊
နဂါး ခံတွင်း ထဲက မြန်မာ ကို ကယ်နိုင် သူ မှရှိပါ့မလား။
ခေတ်သစ် ရာဇဝင် တစ်ခု အဖြစ် ကွယ်ပျောက်မှု ဘဲ ဖြစ်သွားမလား
ပင် မပြောနိုင်တဲ့ အခြေနေကို သိသူ နည်းလွန်းတယ် ထင်ပါတယ်၊၊
April 24, 2012 at 5:51 am | Reply
NLD, BCP, USDP, old MI and all the people are trying to use this Islamophobia to create problems. Although not sure about who are doing this, if the governments fail to control the cause of these ISLAMOPHOBIC HATE letters, they could be found guilty of Genocide.
April 24, 2012 at 5:52 am | Reply
It is the time that all the Muslims started to distribute the Burmese-translated A Myo Pyoke Mhar Sor Kyauk…” books and pamphlets describing that these HATE LETTERS publishing and distributing could be regarded as Hate crime/Genocide. Please translate into Myanmar about the GENOCIDE Crimes, 8 Stages of Genocide and Crimes against Humanity….. These letters brain wash the normal Bamas, Monks, NLD, USDP and Authorities, so they all are thinking that it is all right to assault on ISLAM; verbally, on the net, in the print media and physically.
April 28, 2012 at 9:31 am | Reply
Dr Soe Min wrotearacist posting on his FB
‎”လူကို ကုလား ကုလား နဲ့ခေါ်တာ လူမျိုးရေးခွဲခြားတာပဲ။ ကုလားကို ကုလားလို့ ခေါ်တာ ဘယ်ကုလားမှ မကြိုက်ဘူးဆိုတာ မသိဘူးလား။ ကုလားဘာသာ ကုလား ကုလားဖြစ်နေတာ ဘယ်သူ့ကိုထိခိုက်လို့လဲ။ ကုလားလည်း လူပဲ။ နောက်ကို ကုလား ကုလား မခေါ်ပါနဲ့။ ကုလားပြန်မထူးနိုင်ဘူး။ ဒါပဲ။”
(ဥပဒေသ – စကားလုံး အသုံးအနှုံး အခေါ်အဝေါ်ပြောင်းသွားပေမယ့် လူတွေ ပြောင်းမသွားနိုင်ပါ)
Above is the second post of Racist Dr Soe Min’s post. Please go and read at his post for those multiple racist comments. Dr Charlaton Taubit and Don Steve Evergreen R the only two persons with good comments: but if you call afro-carribbean Niggar or negro and Pakistanese Paki in england, you could end with big trouble. You will lose everything. Racism isasort of crime . We should not do if they dont like. apology if i am patronising you.
Myanmar leaders and the lady should learn alot from this Thai lady « Dr Ko Ko Gyi’s Blog Says:
May 15, 2012 at 1:53 pm | Reply
[…] Many Bamas are swallowing the hook, line, and sinker (drkokogyi.wordpress.com) […]
Breaking News: Another Masjid in Myanmar is destroyed by Radical Buddhists « Dr Ko Ko Gyi’s Blog Says:
May 20, 2012 at 4:55 am | Reply
Reheel Reyaaz Says:
June 3, 2012 at 10:47 pm | Reply
The govt of Burma is cogitating to give human right to all resident nations of Myanmar except Mogh rakhine who are famously known asaterrorists nation of Bangladesh and Myanmar.
This book is exactly Hiltler’s tactic. http://en.wikipedia.org/wiki/The_Protocols_of_the_Elders_of_Zion
June 30, 2012 at 1:30 pm | Reply
TQ very much for understanding and showing the above link. May God bless you for this good deed.
September 22, 2012 at 3:29 am | Reply
Burmese democracy icon Aung San Suu Kyi says the Rohingya conflict should be resolved through negotiations.
Aung San Suu Kyi (l) speaks with RFA’s Burmese service in Washington, Sept. 18, 2012.
Updated at 6:30 p.m. EST on 2012-09-18
Burmese opposition leader Aung San Suu Kyi called Tuesday for the removal of the “roots of hatred” that have fueled the conflict between ethnic Rakhines and Muslim Rohingyas in western Burma, saying the issue has to be resolved through respect for human rights and rule of law, and negotiations.
“Basically, whenever there is hate, there is fear. So, hate and fear are very closely related. You have to remove the roots of hatred—that is to say you have to address these issues that make people insecure and that make people threatened,” she told RFA’s Burmese service in an interview.
“Whenever people talk about conflict resolution, whatever kind of advice they give, there is one that is unavoidable—you have to talk to one another, you have to negotiate, you have to sort out your problems through speech rather than violence,” she said.
Aung San Suu Kyi has been criticized by rights groups for not speaking out more forcefully on the Rohingya issue following bloody violence between the Rohingya and Rakhine communities in Rakhine state in June, which killed 80 people and left tens of thousands displaced.
The clashes had sparked international allegations that human rights violations were being committed against the Rohingya, who the United Nations says are the world’s most oppressed group. The Burmese authorities do not regard them as an ethnic group even though they have lived for generations in the country.
Last week, exiled Tibetan spiritual leader the Dalai Lama told students in India that he had written to Aung San Suu Kyi about the Rohingya issue but did not receivearesponse.
“We wrotealetter to Suu Kyi regarding the violence but we got no reply. My representative in [New] Delhi even met the Burmese Ambassador here but it has been four weeks and we have not heard from them. There is no channel for us to approach,” the Dalai Lama said, according to the Press Trust of India.
In an indirect reference to her relative silence on the Rohingya issue, Aung San Suu Kyi said earlier that many did not realize that her National League for Democracy (NLD), the main opposition party in parliament, was not in the government.
She said that the NLD is not ina“position to decide what we do and how we operate because we are notagovernment.”
“This needs to be understood by those who wish the NLD to do more.”
Aung San Suu Kyi, who arrived on Monday foranearly three-week U.S. visit, also explained that her NLD gives top priority to human rights and the rule of the law in any resolution of the conflict, noting that such differences areauniversal problem and not confined to Burma only.
“I have always said—this is the policy of my party—that human rights and rule of law are necessary in order to bring down tensions in suchasituation.”
“But in the long run, you have to build up harmony between the communities through understanding, through exchange.”
She also stressed that human rights should be applied to “everybody and equally” to all groups.
“To ignore either human rights or rule of law or to insist on human rights and pretend rule of law is another matter will not work. These two have to go together.”
Aung San Suu Kyi also said that her NLD party wants to help the government to end the crisis in Rakhine state.
“We [the NLD] do not want to make political capital out of the situation in Rakhine state. We want to give the government all the opportunities it needs to defuse the situation there,” she said earlier when speaking ataWashington forum organized by the Asia Society.
“We want to help the government in any way possible to bring about peace in Rakhine state.”
Two weeks ago, the United States expressed “great concern” over the humanitarian situation in Rakhine state, followingavisit by the American ambassador to the area.
“Broad swathes of both communities have been affected, and the humanitarian situation remains of great concern,” the U.S. Embassy in Rangoon said inastatement after the visit byagroup led by newly appointed Ambassador Derek Mitchell and senior State Department official Joseph Yun.
“Going forward, it will be important to address the urgent needs, while also laying the groundwork foralong-term, sustainable and just solution” to the conflict, the embassy said.
Burmese President Thein Sein recently suggested that the Rohingyas should be deported, raising an outcry from rights groups. Thousands of Buddhist monks took to the streets to back his call and protest against the Rohingyas.
Aung San Suu Kyi also touched on the following subjects in her interview with RFA:
Transition to democracy:
Asked what her biggest concern was during the current transition in Burma, she said, “My great concern is to empower the people to be able to build the kind of society they want. That is what democracy means,” she said.
Burma, she said, sufferedasetback during years underapoor education system and has more work to do to build upa“healthy political culture” in which people are willing to compromise, she said.
“We are weak when it comes to negotiated compromise. It’s not part of our society or culture.”
But she said that the people were learning quickly. “If we had not been capable of negotiated compromise, we would not be where we are now.”
Speculations that Thein Sein will win the next Nobel Peace Prize:
Asked if Thein Sein could be awarded the next Nobel Peace Prize for spearheading Burma’s reforms since his government came to power last March, she said she had not heard it wasapossibility.
“I don’t believe in engaging in speculation,” she said.
In her remarks at the Asia Society, she also spoke on:
2010 elections held by the previous military junta:
She said that the opposition had “grave doubts” about how the government conducted the 2010 elections, which were widely seen as “deeply flawed.”
The NLD had been banned for boycotting the 2010 elections, but the reformist President Thein Sein allowed the party to re-register after his nominally-civilian government took power in March last year.
Concerns over the Constitution framed by the junta:
Aung San Suu Kyi criticized the current government for requiring new members of parliament from her party to swear to promise to protect the 2008 constitution which “we felt was not conducive to the building ofagenuine democratic society.”
The constitution guaranteed that the military would maintainachokehold on the parliament.
Easing of sanctions:
“I do support the easing of sanctions because I think that our people must start to take responsibility for their own destiny,” she said.
“We should not depend on U.S. sanctions to keep up the momentum for democracy. We have got to work at it ourselves.”
“It does not mean that because the U.S. is engaging with Burma it should in any way be seen asahostile step towards China,” she said. China wasakey ally of Burma during the decades of military rule.
“We can use our new situation to strengthen relations between all three countries. For us—to put it very simply—it would be to our advantage for the U.S. and China to establish friendly relations.”
Reported by Nyein Shwe for RFA’s Burmese service. Written in English by Parameswaran Ponnudurai, Joshua Lipes and Rachel Vandenbrink.
Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.http://www.rfa.org/english/news/burma/rohingya-09182012133807.html
February 23, 2013 at 11:08 am | Reply
Bamas do not wish to compete the Ethnic and Religious Minorities on the level playing field.
February 27, 2013 at 2:42 am | Reply
TQ Minister U Aung Min for stupidly confirming your government’s ignorance in Internationally accepted Human Rights Standerds
I am thanking him for his words to the International Islamic leaders. May be he had told the UN and International Human Rights leaders. His words are effectively incrementing and his words alone could made him earn the guilty verdict at ICC.
ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းရဲ့အဖြေက ကျွန်တော့်ကို တော်တော်အံ့အားသင့်သွားစေခဲ့ပါ တယ်။
“ဟုတ်တယ်-မွတ်စလင်နိုင်ငံတွေက-ကျွန်တော်တို့ကို-ပရက်ရှာတွေ- တော်တော်ပေးတယ်-မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့-ကျွန်တော်ပြန်ပြောလိုက်တယ်-ဆူးလေ ဘုရားနားကိုလာကြည့်ပါ-ဘုရားရယ်-ဗလီရယ်-ချခ်ျရယ်-ဘာသာစုံ-တစ်နေရာထဲမှာ-အေးအေးချမ်းချမ်းနေနှိုင်တာ-ဘယ် နိုင်ငံမှာရှိလဲ-ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲ ဒါမျိုးရှိတယ်-ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံမှာ ကျွန်တော်ဘုရားလာတည်မယ်-ရမလား-လို့ ပြန်မေးလိုက်တယ်” တဲ့ဗျား။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၆-၂-၂၀၁၃ ရက်နေ့က မြမန္တလာဟိုတယ်မှာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းနဲ့ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်းတို့နှင့်တွေ့ဆုံခွင့် ရခဲ့တုန်းကအပြန်အလှန်ပြောဆိုဖြစ်ခဲ့တာလေးတွေကိုပါ။
ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းကို ကျွန်တော်က ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပြန့်ပွားနေတဲ့ (Hate Speach) တွေကို တားမြစ် ပေးဖို့တင်ပြခဲ့ပါတယ်။မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံစကားတွေ -စွတ်စွဲချက်တွေနဲ့ အမုန်းတရားတွေဟောပြော ဖြန့်ဝေနေတာတွေ ကို နိုင်ငံတော်အစိုးရက တားဆီးပေးသင့်ပါတယ်-နိုင်ငံတော်မဟာသံဃနာယကဆရာတော်ကြီးများကိုလဲ ဒီဟောပြောချက် တွေကို ဟန့်တားပေးပါမည့်အကြောင်း လျှောက်ထားသင့်ပါတယ်- လို့ပြောလိုက်တော့။
ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းရဲ့အဖြေက ကျွန်တော့်ကို တော်တော်အံ့အားသင့်သွားစေခဲ့ပါတယ်။
ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းအဖြေပေးခဲ့တာက “ဟုတ်တယ်-မွတ်စလင်နိုင်ငံတွေက-ကျွန်တော်တို့ကို-ပရက်ရှာတွေ- တော်တော်ပေးတယ်-မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့-ကျွန်တော်ပြန်ပြောလိုက်တယ်-ဆူးလေ ဘုရားနားကိုလာကြည့်ပါ-ဘုရားရယ်-ဗလီရယ်-ချခ်ျရယ်-ဘာသာစုံ-တစ်နေရာထဲမှာ-အေးအေးချမ်းချမ်းနေနှိုင်တာ-ဘယ် နိုင်ငံမှာရှိလဲ-ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲ ဒါမျိုးရှိတယ်-ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံမှာ ကျွန်တော်ဘုရားလာတည်မယ်-ရမလား-လို့ ပြန်မေးလိုက်တယ်” တဲ့ဗျား။
“ ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းခင်ဗျား-ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားအဓိပ္မါယ်ကို-ဝန်ကြီးသဘောမပေါက်ဘူးထင်ပါတယ်- ကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပြပါရစေ—-ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ-အစ္စလာမ်ဘာသာကိုဆန့်ကျင်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေဟာ ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာရော-ပုံနှိပ်မီဒီယာမှာပါပြန့်နှံ့နေပြီး တရားပွဲတွေမှာ ဟောပြောနေတာတွလဲ တွေ့နေရပါတယ် ”-ဆိုတော့
ဝန်ကြီးက “မရှိပါဘူး ” တဲ့ဗျာ-
ကျွန်တော်က“ဟာ-ဝန်ကြီးရယ်-ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ-လူသိရှင်ကြားပါ-ဂျာနယ်တွေထဲမှာပါပါတယ်-ကရင်ပြည်နယ်မှာ- မွန်ပြည်နယ်မှာ-တာချီလိတ်မှာ-ဧရာဝတီတိုင်းမှာ နေရာအနှံ့ ထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်နေတာပါ-ရန်ကုန်မြို့လည်ခေါင်မှာ- တရားပွဲတွေလုပ်ပြီးဟောပြောနေသလို-မန္တလေးမှာလဲ မြို့အနှံ့ မွတ်စလင်မ်ဆန့်ကျင်ရေးစာရွက်စာတမ်းတွ ဝေနေပါတယ်” ဆိုတော့ ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းက လက်ခံလိုပုံမရပေမဲ့ ဝန်ကြီးဦးစိုးသိန်းက “ဟုတ်ပါတယ်-ဖြစ်နေပါတယ် ”-လို့ လှမ်းပြော လိုက်တော့မှ မငြင်းတော့ပါဘူး။
ဒါနဲ့ကျွန်တော်က ဆက်ပြီးတော့- “ ဒီကိစ္စတွေကို-သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများကနေ တားဆီးပေးစေချင်ပါတယ်- ဒီစာရွက်တွေဝေတာ-တရားတွေဟောတာဟာ- ကျွန်တော်တို့အတွင်တော့ ပြသနာမရှိပါဘူး- ကျွန်တော်တို့ အရေထူနေပါ ပြီ -ကျွန်တော်တို့မှာ ငြိမ်းချမ်းစွာနေလိုကြတဲ့ ရဟန်းသံဃာတွေ-လူထုတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်- ဒါပေမဲ့-ဒီဟောပြော ချက်တွေ- ကြော်ငြာချက်တွေဟာ-မြန်မာပြည်ထဲတင်ပြန့်တာမဟုတ်ပါဘူး-နိုင်င့တကာမီဒီယာတွေကတဆင့်-အင်္ဂလိပ်ဘာ သာပြန်ပြီး-တကမ္ဘာလုံးကိုပြန့်နေပါတယ်-ဒီလို တကမ္ဘာလုံးကိုပြန့်တော့-မွတ်စလင်မ်နိုင်ငံတွေက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ဖိအား ပေး-ဒီလိုဖိအားပေးတော့-မင်းတို့မွတ်စလင်မ်နိုင်ငံတွေက တို့နိုင်ငံကိုဖိအားပေးတယ်ဆိုပြီး-ကျွန်တ်ာတို့ မွတ်စလင်မ်တွေ ကိုပဲအပြစ်မြင်-ဖြစ်ရလို့ပါ-မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံတကာ ပုံရိပ်ကိုလည်း ထိခိုက်စေတဲ့ကိစ္စမို့ပါ” —လို့ရှင်းပြတောင်းဆိုခဲ့ရ ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း-ဝန်ကြီးများဘက်ကနေ တတ်နိုင်သမျှ တာီးး ဟန့်တားပေးပါ့မယ်-ဆိုတဲ့ အဖြေ-မရခဲ့ပါဘူး။
အဆိုပါ ကိစ္စတွေဟာ-လွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာခေတ်ရောက်လာလို့ပဲ ဖြစ်ရသယောင်ယောင်-ဒါတွေကို တားဆီးလိုက်ရင်ပဲ-မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့်ကိုထိပါးသွားမှာ ဖြစ်သယောင်ယောင် ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
သူတို့က Hate Speach တွေပြောရင်- ခင်ဗျားတို့က Love Speach တွေများများပြောပေါ့ဗျာ-ခင်ဗျားတို့ ပြောခွင့်ရဘို့- ဝန်ကြီးချုပ်ဦးရဲမြင့်ကိုလည်း တင်ပြပေးပါ့မယ်- ဆိုတာလောက်ပဲ -အဖြေရခဲ့ပါတယ်။
တကယ်ဆိုရင် လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့် -ဆိုတာထဲမှာ-ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ထိပါးဆန့်ကျင်ပြောဆိုလို့ မရပါဘူး။
အခုလို ဘာသာရားတခုခုကို မုန်းတီးလာအောင်- မဟုတ်မမှန် စွတ်စွဲပြောဆို ရေးသား ဟောပြောမှုတွေဟာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြခံဥပဒေကို ဆန့်ကျင်နေတာ အထင်အရှားပဲဖြစ်ပါတယ်။ တာဝန်ရှိသူအစိုးရအနေနဲ့ မဖြစ်မနေ ဟန့်တား အရေးယူရမဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တင်ပြတောင်းဆိုတဲ့အထဲမှာ-အရေးယူဖို့ မပါပါဘူး-ဒါပေမဲ့ ဝန်ကြီးမင်းများ-ဘာမှလုပ်မပေးခဲ့ပါဘူး။ လုပ်ပေးပါ့မယ်-လို့လဲ ကတိမပေးခဲ့ပါဘူး။
အဲ့ဒီတော့-ကိုမြအေးတို့အဖွဲ့နဲ့ တွေဆုံတဲ့ အခန်းအနားမှာ -ကျွန်တော်က ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုထောက်ပြပြီးတော့-
ငြိမ်းချမ်းရေး-ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ရေး-ပြည်ထောင်စုကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့အတွက် ကြိုးပမ်းအားထုတ်တဲ့ နေရာမှာ- လူနဲစုတွေအားထုတ်တာထက်-လူများစုက အားထုတ်တာ ပိုမိုထိရောက်ပါတယ်-ဒါကြောင့် လူများစုကလည်း ကြိုးပမ်းအားထုတ်ကြရပါမယ်- ဒီလိုပါပဲ- တိုင်းသူပြည်သားတွေက ကြိုးပမ်းအားထုတ်တာထက်- အစိုးရက ကြိုးပမ်း အားထုတ်တာက ပိုမိုထိရောက်ပါတယ်- ကြိုးပမ်းအားထုတ်ဖို့ အစိုးရမှာ အဓိကတာဝန်ရှိပါတယ်။
ကိုမြအေးတို့ အဖွဲ့ဟာ အစိုရအဖွဲ့ဝင်လူကြီးများကို လက်လှမ်းမှီပါတယ်- အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေကို Educate လုပ် ပေးကြပါ- တာဝန်ရှိတာတွေ ပြောပြပေးကြပါ။ https://drkokogyi.wordpress.com/2013/02/26/tq-minister-u-aung-min-for-stupidly-confirming-your-governments-ignorance-in-internationally-accepted-human-rights-standerds/
၈၈ ခေါင်းဆောင် ကိုမြအေး တို့အဖွဲ့နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်း-Racist ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်း….https://drkokogyi.wordpress.com/2013/02/26/%E1%81%88%E1%81%88-%E1%80%B1%E1%80%81%E1%80%AB%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9-%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%B1%E1%80%A1%E1%80%B8/
December 20, 2015 at 1:44 pm | Reply
February 22, 2016 at 2:55 am | Reply
နှစ်ပေါင်း ၅၀ လောက် ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ခွဲခြားဆက်ဆံဖို့ အစိုးရအဆက်ဆက်က သင်ပေးနေတာကို
NLD အစိုးရ ၅ နှစ်ဖြစ်ရုံနဲ့ ခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေ ချက်ချင်းပျောက်သွားမယ်၊ မခွဲခြားတော့ဘူးလို့ထင်ရင် ထင်နေသူ အမှားကြီး မှားနေပြီလို့ပဲ ပြောမယ်။
မဘသ ဘုန်းကြီးတွေ လူမျိုးရေး ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဗြောင်ခွဲခြားနေတာ ၂၀၁၂ ကတည်းကပါ။ ဒီထက်မက စောတာကိုလည်း လူတိုင်းမြင်ဖူးပြီးသားပါ။
ခွဲခြားဆက်ဆံမှုဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ လမ်းစဉ်မဟုတ်ကြောင်း၊ လူသားအားလုံးဟာ တန်းတူရည်တူဖြစ်ကြောင်း၊ သတ္တ၀ါအားလုံးကို မေတ္တာထားတာဟာ ဗုဒ္ဓလမ်းစဉ်ဖြစ်ကြောင်းစတာတွေကို
မဘသမဟုတ်တဲ့ ထေရ၀ါဒအစစ်အမှန်ဘုန်းတော်ကြီးများစွာက အမှန်အကန်ထုတ်ပြောလာတဲ့တစ်နေ့။
ဒီလို ဟောကြားသမျှကို ဗီဒီယိုတွေနဲ့ ကျေးလက်တောရွာအနှံ့နေရာတိုင်းကို ရောက်လာမယ့်တစ်နေ့…
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ခွဲခြားဆက်ဆံမှု တစ်ဝက်လျော့ကျသွားပါလိမ့်မယ်။
မြန်မာနိုင်ငံတိုးတက်အောင် ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ လမ်းစဉ်အစစ်အမှန်ကို ချပြနိုင်သူတွေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးတွေသာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကို ငြိမ်းချမ်းအောင် လုပ်နိုင်သူတွေဟာလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးတွေသာဖြစ်သလို မြန်မာတွေကို သွေးဆူအောင် လုပ်နိုင်သူတွေဟာလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးတွေသာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ ၈၅% လောက်ကို ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးတွေရဲ့ အတွေးအမြင် အယူအဆတွေက လွှမ်းမိုးနေတာ အမှန်ပါပဲ။
မြန်မာနိုင်ငံထဲက စာသင်ခန်းတွေ၊ ရုံးတွေ၊ ၀န်ထမ်းတွေ၊ ပြည်သူပြည်သားတွေထဲမှာ အရိုးစွဲနေတဲ့ racism ကို ပပျောက်အောင်လုပ်နိုင်ဖို့
၁) ထိရောက်တဲ့ ပညာရေး
၂) တက်လာတဲ့ အစိုးရရဲ့ မူဝါဒအပြောင်းအလဲ
၃) ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်ရဲ့ တိုးတက်ပြောင်းလဲလိုတဲ့ သဘောထားအမြင် နဲ့
၄) မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့ နိုင်ငံတကာနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်လိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေကသာ racism ကို အဆုံးသတ်ဖို့ လုပ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်။
Racism မပျောက်မချင်း ကမ္ဘာမှာ နံမည်ပျက် မပျောက်နိုင်ပါဘူး။
February 9, 2017 at 9:59 am | Reply
Dr. Maung Zarni UK
Myanmar generals are brilliant if thuggish ruling overamass of zombies. As brilliant as Donald Trump. For hate is typically manufactured and mobilized by Fascist states. Both USA and Myanmar are mentionable in the same breath. Myanmar military has manufactured hate against Rohingyas and other Muslims in the country through the effective use of the armies of narrow-minded and poorly-educated monks and Myanmar journalists. Typically generals have nothing but disdain for those who makealiving withapen or an alms bowl. There is one major difference: the American society has significant segments of compassionate and enlightened citizens whereas the Burmese society at large is pretty much dead, in mind and heart.
February 9, 2017 at 10:00 am | Reply
Genocidal regimes, killers and accomplices typically deny their atrocity crimes. Post-WWII Germany’s case is an exception. Myanmar will NEVER admit to its crimes of these proportions. We are pathetically stuck in the victim mentality. Sadly, the society shows no signs of Enlightenment, intellectual or otherwise. The strains of religious faiths there tend to be deeply conservative, if not outrightly reactionary, not to mention the thuggish nature of the military leaders who dehumanise anyone outside of the military institution.
May 7, 2017 at 3:32 am | Reply
သူတို့ပြောနေတဲ့ “အမျိုးသားရေးနဲ့ အမျိုးသားနိုင်ငံရေး” ဘာလဲ (မိုးမခ) မေ ၆၊ ၂၀၁၇
ဒီတိုင်းပြည်မှာ “အမျိုးသားရေးနဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံရေး”ကို ကံထရိုက်ဆွဲပြီး ပြောနေ၊လုပ်နေတဲ့အုပ်စု ၃ ခုရှိနေတာ အထင်အရှား တွေ့ရပါတယ်။
၃။ သင်္ကန်းဝတ်များ (မဘသ) ဒီအုပ်စု ၃ ခုထဲမှာ ပင်ရင်းအုပ်စုက “စစ်အုပ်စု” ဖြစ်ပြီး။ ကျန်တာ နှစ်ခုက စစ်အုပ်စုရဲ့ လက်ခွဲတွေသာဖြစ်ပါတယ်။
4. ဒါ့အပြင် စပွန်ဆာပေးမွေးမြူထားတဲ့ အခြားသောကိုင်းဖျားကိုင်းနားလက်ခွဲလေးတွေရှိပါသေးတယ်။
အဲဒီ အုပ်စု ၃ စု နဲ့ သူတို့ အော်ဟစ်နေတဲ့ “အမျိုးသားရေးနဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံရေး” ကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
ပထမအချက်အနေနဲ့ သူတို့ပြောနေတဲ့ “အမျိုးသားရေးနဲ့ အမျိုးသား နိုင်ငံရေး” ဘာလဲ ဆိုတာကို ကြည့်ကြရအောင်။
သူတို့ပြောတဲ့ “အမျိုးသားရေးနဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံရေး” ဆိုတာ အောက်ပါ အချက် ၃ ချက်ကို ဖုံးကွယ်ထားတာဖြစ်ပြီး။
ဒီလိုဖုံး ကွယ်ထားတာရဲ့ တစ်ခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်ကတော့ “စစ်အုပ်စု” သားစဉ်မြေးဆက် အာဏာတည်တံ့ခိုင်မြဲရေးဖြစ်ပါတယ်။
“ တပ်မတော်” ကို စစ်အုပ်စုက တစ်လက်ကိုင်တပ်သဖွယ်လုပ်ပြီး၊ ဂုတ်ခွစီးထားတဲ့အချက် ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေရဲ့ အထက်မှာ စစ်အုပ်စု ထာဝစဉ်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်
တိုင်းပြည်ရဲ့အသက်သွေးကြောဖြစ်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှန်သမျှကို စစ်ဗျူရိုကရက်အရင်းရှင်လူတန်းစားက လွှမ်းမိုးချုပ် ကိုင်သိမ်းပိုက်ထားတယ်ဆိုတဲ့အချက် ၃ ချက်ကို ဖုံးကွယ်ထားဖို့သာဖြစ်တယ်။
ဗိုလ်နေဝင်းစစ်အုပ်စုက “ဆိုရှယ်လစ်လှိုင်း” ရေပန်းစား၊ ဖက်ရှင်ဖြစ်နေတဲ့ ၆၀ ခုနှစ်များ တစ်ဝိုက်မှာ (မဆလ)ဆိုတဲ့ “ဆိုရှယ်လစ်အတုမျက်နှာဖုံး”စွပ်ပြီးသူတို့စစ်အုပ်စု နိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံပေါ်တက်လာခဲ့တယ်။ တစ်ပါတီနိုင်ငံရေး လုပ်ခဲ့တယ်။ ၂၁ ရာစုမှာ “ဆိုရှယ်လစ်” က ဖက်ရှင်မကျတော့ဘူး။ “တပါတီနိုင်ငံရေး” လည်း လုပ်လို့ မရတော့ဘူး။ ဒါကတော့ ပြည်တွင်း အကြောင်းအချက်နဲ့တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်တယ်။
(မဆလ) ပါတီနဲ့ ၁၉၇၄ အခြေခံ ဥပဒေကို “၁၉၈၈ ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီး”က မြေမြှုပ်သဂြိုဟ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။ ဒီတော့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ဒီဆိုင်းဘုတ်တွေ ကိုင် လို့၊ ထောင်လို့မဖြစ်တော့ဘူး။
ဒါ့အပြင် (မဆလ) တဖြစ်လဲ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ(တစည)ကို လည်း “၁၉၉၀ ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲ” မှာ ပြည်သူလူထု တစ်ရပ်လုံးက မြောင်းထဲတွန်းချလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်။ ဒီတော့ (တစည) ပါတီလို “တိုင်းရင်းသား အရေး” ဆိုင်းဘုတ်ထောင် လို့လည်း မဖြစ် နိုင်တော့ဘူး။ လက်တွေ့မှာ (တစည)ပါတီ နိုင်ငံရေးနလန်မထူနိုင်တာကို ပဲကြည့်ပေါ့။ ပြည်သူတွေကို အမည်ပြောင်း၊ တံဆိပ်ပြောင်း လှည့်စားရုံနဲ့ မရတော့ဘူးဆိုတာ ရှင်းနေတာပဲမဟုတ်လား။ “တိုင်းရင်းသားအရေး” သူတို့အော်ချင်လို့ အောင် မရတော့တဲ့ နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့ အချက်တစ်ခု ရှိပါသေးတယ်။ အဲဒါကတော့ “ဖက်ဒရယ်” ဆိုတာ “ခွဲထွက်ရေး (ဝါ) ပြည်ထောင်စုဖြိုခွဲရေးဖြစ်တယ်”လို့ သူတို့ပဲ တလျှောက်လုံးသရုပ်ဖျက်ခဲ့ကြတာ မဟုတ်လား။ ဒီတော့ စစ်အုပ်စု ဟာ သူတို့ ထွေးခဲ့တဲ့ တံတွေးမစင်ကို ပြန်မျိုဖို့ ခက်နေတယ်။
ဒီအချက်တွေ ဒီရေခံမြေခံတွေဟာ “အမျိုးသားရေးနဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံရေး”ဆိုင်းဘုတ်ကို ခါတော်မီသူတို့ ပြောင်းကိုင်လာရတဲ့ အချက်တွေပဲဖြစ်ပါ တယ်။
ဗိုလ်နေဝင်းစစ်အုပ်စုဟာ တပ်မတော်ကို ခါးပိုက်ဆောင်တပ်သဖွယ်လုပ်ပြီး၊ တစ်လက်ကိုင်တပ်သဖွယ်လုပ်ပြီး “ဆိုရှယ်လစ်အတု” နဲ့ လှည့်စားခဲ့ ပြီးပြီ၊ “ဖက်ဒရယ်တစ္ဆေ” နဲ့ ခြောက်လှန့်ခဲ့ပြီးပြီ။ ပါတီနိုင်ငံရေးလုပ်ခဲ့ပြီးပြီ၊ ဒါတွေကို ပြည်သူတွေက နောကျေနေခဲ့ပြီ။
ဒီတော့ “ဒီမိုကရေစီရေပန်းစားဖက်ရှင်ဖြစ်လာတဲ့” ခေတ်ကာလမှာ
ဒီမိုကရေစီကို “စည်းကမ်းပြည့်ဝသော” ဆိုတဲ့ ဝိသေသတပ်ပေးပြီး၊
အခြား တစ်ဖက်မှာတော့ “အမျိုးသားရေး” ဆိုတဲ့ မီးရှူး မီးပန်းကို အူယားဖားယားပစ်ဖောက်လာတာဖြစ်တယ်။
ဒါကြောင့် ဗိုလ်သန်းရွှေနဲ့ ဗိုလ်သန်းရွှေလွန်စစ်အုပ်စုဟာ “တပ်မတော်” ကို ခါးပိုက်ဆောင်တပ်သဖွယ်၊ တစ်လက်ကိုင် တပ် သဖွယ် ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ချုပ်ကိုင်ထားတဲ့အခြေခံပေါ်မှာ “၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ”ဆိုတဲ့ ကစားကွက်ကို ချခင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကစားကွက်တစ်ခုလုံးကို ချုပ်ကိုင်ထားတဲ့ အဓိကကြိုးနှစ်ချောင်းကတော့
“နိုင်ငံတော်၏ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်မှု အခန်းကဏ္ဍတွင် တပ်မတော်က ပါဝင်ထမ်းဆောင်နိုင်ရေးတို့ကို အစဉ်တစိုက်ဦးတည်သည် ” ဆိုတဲ့ကြိုးနဲ့
“တပ်မတော်သည် နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် အဓိကတာဝန်ရှိသည်” ဆိုတဲ့ ကြိုးနှစ်ချောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
“စည်းကမ်းပြည့်ဝတဲ့ ဒီမိုကရေစီ” ဆိုတာရဲ့ အကျဉ်းအကျယ်ဟာ ဒီကြိုးနှစ်ချောင်းရဲ့အလျှော့အတင်းပေါ်မူတည်နေတာပါ။ စစ်အုပ်စုနဲ့ စစ်အုပ်စုအကျိုးစီးပွား ကို တစုံတရာထိခိုက်လာတဲ့အခါ ဒီကြိုးနှစ်ချောင်းဟာ တင်းကြပ်လာမှာဖြစ်တယ်။
စစ်အုပ်စုနဲ့ စစ်အုပ်စုအကျိုးစီးပွားကို စစ်အုပ်စုရဲ့ အာဏာဗဟိုချက်ကို ထိပါးလာမယ်ဆိုရင်တော့ ပိုပြီးတော့ တင်းကြပ်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေကို ထိပါးလာတာမှန်သမျှကို စစ်အုပ်စုက “၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေနဲ့ စစ်တပ်” ကို ကိုင်ပြီး လိုအပ်သလို ဖြေရှင်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုဖြေရှင်းမှုကို စစ်အုပ်စုက “အမျိုးသားရေး (ဝါ) အမျိုးသားနိုင်ငံရေး” လို့ ဆိုင်းဘုတ်ချိတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ် တော့ ဆိတ်ခေါင်းချိတ်ပြီး ခွေးသားရောင်းတာမျိုးသာဖြစ်တယ်။
ဒါဟာ ယနေ့ စစ်အုပ်စုကပြောနေတဲ့ အမျိုးသားရေး (ဝါ) အမျိုးသား နိုင်ငံရေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်အုပ်စုက နိုင်ငံရေး (ဝါ) ပါတီနိုင်ငံရေးမလုပ်ဘူးလို့ ပြောနေတာဟာ ဒီအချက်ကို ဖုံးကွယ်ထားဖို့ ဖြစ်ပြီး၊ ပါတီနိုင်ငံရေးလုပ်ဖို့က ကြံ့ဖွံ့ပါတီကို ခွဲပေးထားတဲ့ ကဏ္ဍဖြစ်နေပြန်တယ်။ စစ်အုပ်စုက “ပါတီနိုင်ငံရေးမလုပ်ဘူး” လို့ပြောနေတဲ့ အချက် ကို ကြံ့ဖွံ့ပါတီပြောတဲ့ “အမျိုးသားရေး” ဆိုတာမှာ ထည့်သွင်း ဖွင့်ချပြပါ့မယ်။ ကြံ့ဖွံ့ပါတီက ပြောတဲ့ “အမျိုးသားရေး” ကို ကြည့်ကြပါအုံးစို့။ ကြံ့ဖွံ့ပါတီကပြောတဲ့“အမျိုးသားရေး”ဆိုတာ စစ်အုပ်စု အကျိုးစီးပွားကို နိုင်ငံပါတီပုံစံနဲ့ ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း သာဖြစ်တယ်။ စစ်အုပ်စုက ကြံ့ဖွံ့ဆိုတဲ့ ပါတီဖွဲ့ပြီး သူခင်းကျင်းထားတဲ့ “စည်းကမ်းပြည့်ဝတဲ့ ဒီမိုကရေစီဘောင်” မှာ နိုင်ငံရေးကစားခြင်း သာဖြစ်တယ်။ တကယ်တော့ စစ်အုပ်စုက ပါတီနိုင်ငံရေးကို လွှတ်တော်ထဲမှာ ကာချုပ်က ချုပ်ကိုင်ထားတဲ့ စစ်ဗိုလ် ၁၆၆ နဲ့ ကစားပြီး၊ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတဲ့ ပြိုင်ကွင်းမှာတော့ ကြံ့ဖွံ့ပါတီကို ကိုင်ပြီး ကစားတာပဲဖြစ်တယ်။ ဒီနှစ်ခု ( စစ်ဗိုလ် ၁၆၆ ယောက်နဲ့ ကြံ့ဖွံ့ပါတီ) ဟာ အပေါ်ယံအသွင်သဏ္ဍာန်အရ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု မတူသော်လည်း၊ အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့ “စစ်အုပ်စုအကျိုးစီးပွား”ကို လိုက်နာထိန်းသိမ်း ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ သူတို့ဟာနှစ်ကိုယ့်တစ်စိတ်ဖြစ်တယ်။ နောက်ထပ်တူညီတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ စစ်ဗိုလ် ၁၆၆ ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကြံ့ဖွံ့ပါတီပဲဖြစ်ဖြစ် စစ်အုပ်စု (ဝါ) ကာချုပ်ရဲ့အမိန့်ကို တသွေမတိမ်းနာရခံမှုပဲဖြစ်တယ်။ စစ်တပ်ထဲက အငြိမ်းစား ယူ သွားတဲ့ စစ်ဗိုလ်တွေဟာ ကြံ့ဖွံ့ပါတီထဲမှာ ဗိုလ်တက်လုပ်တာပဲဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် “ပါတီနိုင်ငံရေး မလုပ်ဘူး”လို့ စစ်အုပ်စုကပြောနေတာဟာ အရှက်မရှိလိမ်ညာဖုံးကွယ်နေတာကလွဲပြီး တခြားအချက် မဖြစ်နိုင် တော့ပါဘူး။ ကြံ့ဖွံ့ပါတီကိုကိုင်ပြီး ပါတီနိုင်ငံရေးလုပ်စေတဲ့ နောက်တစ်ချက်ရှိပါသေးတယ်။ အဲဒီအချက်က “ပါတီနိုင်ငံရေးဆိုသည်မှာ မိမိပါတီအင်အားတောင့်တင်းရေး၊ ပါတီ၏နိုင်ငံရေးအာဏာရရှိရေး၊ ရရှိပြီးဖြစ် သည့် အာဏာတည်မြဲရေးတို့ကို အစဉ်တစ်စိုက်ဦး စားပေးနေရသည့်အတွက် အမျိုးသားနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းမှသွေဖည်မှုမျိုး၊ တစ်ခါ တစ်ရံအမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကို လစ်လျူရှုမှုမျိုးရှိနိုင်ကြောင်း” ဆိုတဲ့ နှပ်ကြောင်း အကွက်ချပုံဖော်ဖန်တီးဖို့လည်းဖြစ်တယ်။ အဲဒီအပေါ် က စာလုံးစောင်းနဲ့တင်ပြထားတဲ့ စကားကို ကာချုပ်က “တပ်မတော်နေ့” မိန့်ခွန်းထဲမှာထည့်ပြောသွားတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကွက် ကို စစ်အုပ်စုနဲ့ ကြံ့ဖွံ့ပါတီက လက်ဝါးခြင်းရိုက်ပြီး ဖန်တီးတာပဲဖြစ်တယ်။ စစ်အုပ်စု အကျိုးစီးပွားကိုထိန်းသိမ်းကာကွယ်ဖို့ လိုအပ်ရင် ကြံ့ဖွံ့ပါတီထဲက အကောင်ခပ်ကြီးကြီးတွေကို ထိုးကျွေးပြီး “ပါတီနိုင်ငံရေး သားကောင်” အဖြစ်ချနင်းဖို့ လည်းစစ်အုပ်စု အတွက်ဝန်မလေး ဘူး။ ဒါကြောင့် စစ်အုပ်စုမှာ မတရားတာ/တရားတာနဲ့ မမှန်တာ/ မှန်တာတွေ မရှိဘူး၊ ထာဝရစစ်အုပ်စုအကျိုးစီးပွားသာရှိတယ်။ ဒီတော့ ကြံ့ဖွံ့ပါတီဟာ ပါတီနိုင်ငံရေးမှာ တို့မီးရှို့မီးလုပ်နိုင်ဖို့ “အမျိုးသား (သို့မဟုတ်) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး” စတဲ့ အမည်လေး တွေ အစီအရီတပ်ထားတဲ့ “စပွန်ဆာပါတီလေးတွေ” ကိုလည်း လိုအပ်သလိုမွေးမြူထားတယ်။ သူတို့ကို လိုအပ်လာတဲ့ တချိန်မှာ “ပါတီ နိုင်ငံရေးသားကောင်” အဖြစ် ထိုးကျွေးခံရမှာပဲ။ စတေးပြစ်လိုက်မှာပဲဖြစ်တယ်။
အခု ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာ ဖြန့်နေတဲ့ ကြံ့ဖွံ့ပါတီ၊ စီအီးစီ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး (၂/၂၀၁၇)မှာ ပြောကြားတဲ့ ကြံ့ဖွံ့ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်သန်းဋ္ဌေးရဲ့ အမှာစကားဆိုတာဟာ “ပါတီနိုင်ငံရေး” ကို ရမယ်ရှာနေတဲ့၊ ဒီချုပ်ပါတီကို ဦးတည်ရန်သူ အဖြစ် ထားပြီး ပုတ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ ဆင်ခြေလိမ်များသာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ မကွေးတိုင်းမှာ မဖုံးနိုင် မဖိနိုင်ပေါ်သွားတဲ့ “ခိုးထုတ်ခိုး ထည်ကိစ္စကြီး” ကို ကာကွယ်နေတာသာဖြစ်ပါတယ်။ ထမင်းရေပူလာ လျှာလွှဲနေတာသာဖြစ်ပါတယ်။
“သူခိုးဟာ အမျိုးသားရေးကို ဘယ်တော့မှ သစ္စာမဖောက်ဘူး”လို့ များပြောချင်နေတာလား မသိပါဘူး။
ဒါတော့ သည်းခံပါ။ ဗိုလ်သန်းဋ္ဌေးက နောက်ကြောင်းပြန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုဟာ “လက်ဝဲဆန်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်”လို့ ပြောပါသေးတယ်။ “ပယောဂမှန်ရင်တုန်ဆင်းသွားမှာပဲ”ဆိုတဲ့စကားလိုပါပဲ။ ထစ်ခနဲရှိရင်(ဗကပ)ကို လက်ညှိုးထိုးချင်တာ စစ်အုပ်စုရဲ့သန္ဓေပါအကျင့်စရိုက် မဟုတ်လား။ (ဗကပ)မရှိတော့ဘူးလို့လည်းနှုတ်လွန်ထားမိလေတော့ (လက်ဝဲလက္ခဏာ) လို့ သိမ်းကျုံးပြီး လက်ညှိုးထိုးလိုက် ရဟန်တူ ပါတယ်။
တကယ်တော့ စစ်အုပ်စုသန္ဓေမှာ ဖျောက်ဖျက်မရတဲ့
လမ်းမပေါ်က (လူထုအရေးတော်ပုံ) ကြောက်ရောဂါ၊
(လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး) ကြောက်ရောဂါ ဆိုတဲ့ ကြောက်စရာရောဂါကြီး ၄ ခု စွဲကပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရောဂါတွေကို အခုတော့ ဗိုလ်သန်းဋ္ဌေးပါးစပ်နေ ပဲ့တင်ထပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ သင်္ကန်းဝတ်များက (မဘသ) ပြောနေတဲ့ “အမျိုးသားရေး” ကို ကြည့်ကြပါစို့။
ဒီချုပ်ခေါင်းဆောင်၊ ဒီချုပ်ပါတီတို့ကို ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေထဲမှာ ထူးခတ်၊ ကျုံးသွင်းပြီးတဲ့အခါမှာ
ပြည်သူလူထုထဲမှာ ဘာသာ ရေး၊ လူမျိုးရေးမှိုင်းတိုက်ပြီး သွေးခွဲတဲ့လုပ်ရပ်တွေဟာ
“၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ” အတည်ပြုပြီးနောက်၊ ကြံ့ဖွံ့ပါတီအစိုးရပေါ်လာပြီးတဲ့ နောက်မှာ စီးရီးလိုက်အသုံးတော်ခံလာပါတော့တယ်။
ဒါကြောင့် “လူမျိုးရေး၊ဘာသာရေး ခုတုံးလုပ်၊ ဗန်းပြအကြမ်းဖက်မှုတွေ” ဟာ
“၂၀၀၈ အခြေခံ ဥပဒေ”၊
“ကြံ့ဖွံ့ပါတီ” တို့နဲ့အတူ စစ်အုပ်စုက မွေးထုတ်လိုက်တဲ့ သုံးမြွှာပူးညီအစ်ကိုတွေလို့ ပြောရမှာပါ။
လုယက် အကြမ်းဖက်တဲ့ ရာဇဝတ်မှုခင်းတွေကို စစ်အုပ်စု၊ ကြံ့ဖွံ့ပါတီအစိုးရ၊ နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့က “ရင်ဝယ်သား” လိုသဘောထားတဲ့ အချက်ပဲ။
ထိရောက်တဲ့အပြစ်ပေးအရေးယူမှု မရှိသလောက်ပဲလို့ ပြောလို့ရတယ်။
ဒီချုပ်အစိုးရရဲ့ မေတ္တာနဲ့အုပ်စိုးမယ်ဆိုတာကို သင်္ကန်းဝတ်တွေ နဲ့ နောက်လိုက်နောက်ပါတွေက သွေးတိုးစမ်းပုံပေါ်ပါတယ်။
အဲဒီ ဒီသင်္ကန်းဝတ်တွေ “အမျိုးသားရေး”လုပ်တော့မှပဲ လက္ခဏာချက် ၂ ချက်နဲ့ စည်း ၂ စည်းဟာ အထင်အရှား ပွင့်ကျ ကွဲပြားသွားပါတော့တယ်။
ပထမတစ်ချက်က ဘုန်းကြီးလောကမှာ “သင်္ကန်းအရေခြုံတွေထားသူတွေ”နဲ့“ဗုဒ္ဓတရားတော်နဲ့ဝိနည်းသိက္ခာကို အစဉ်တစိုက် လေးစားရိုသေတဲ့ရဟန်တော်များ” ဆိုတဲ့ လက္ခဏာနဲ့စည်းဟာ ပြဒါးတလမ်းသံတလမ်း ကွဲပြားသွားပါတယ်။
ဒုတိယအချက်ကသင်္ကန်းအရေခြုံတွေပြောနေတဲ့ “အမျိုးသားရေး” ဆိုတာ စစ်အုပ်စုနဲ့ကြံ့ဖွံ့ရဲ့“အမျိုးသားရေး”နဲ့ တဆင်ထဲ၊ တသွေးထဲ၊ တကွက်ထဲဖြစ်ပြီး၊ သူတို့သတ်မှတ်ချပေးတဲ့လိုင်းအတိုင်း သင်္ကန်းအရေခြုံ ထားသူတွေက လူမျိုးရေး၊ဘာသာရေး ခုတုံးလုပ် ဗန်းပြပြီး အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းနေကြခြင်းဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။
တကယ်တော့ “စည်းကမ်းပြည့်ဝသောဒီမိုကရေစီဘောင်” ထဲမှာ
ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးခုတုံးလုပ်၊ ဗန်းပြပြီး ပြည်သူအချင်း ချင်းသွေးခွဲရန်တိုက်ပေးတာဟာ မိုက်မဲပြီး အင်မတန်ယုတ်မာလွန်းတဲ့ လုပ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ မီးနဲ့ ကစားတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူ တွေရဲ့ လည်ချောင်းသွေးနဲ့ ခြေဆေးတမ်း ကစားခြင်းမျိုးသာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး ခုတုံးလုပ်ဗန်းပြပြီး ပဋိပက္ခမီးတောက် တွေကို မပြတ်မွှေးထားခြင်းအားဖြင့် လက်ရှိစစ်အုပ်စုအနေနဲ့ “တပ်မတော်မရှိလို့ မဖြစ်ဘူး” ဆိုတဲ့ လုပ်ကြံဇာတ်ကွက်ကို ချပြနိုင်မှာ၊ အချိန်မရွေးခင်းနေနိုင်မှာမဟုတ်ပါလား။ ဒီအချက်ဟာ စစ်အုပ်စုက အာဘောင်အာရင်းသန်သန်နဲ့ပြောနေတဲ့ “တပ်မတော်ရဲ့အမျိုးသားရေးလိုအပ်ချက်နဲ့၊ အမျိုးသား နိုင်ငံရေးအခန်းကဏ္ဍမှာ တပ်မတော် မရှိလို့ မဖြစ်ဘူး”ဆိုတဲ့ အချက်တို့ရဲ့ စံကျတဲ့ တပေါင်းတစည်းတည်းရှိမှုပါပဲ။
နောက်ဆုံးမှာတော့ ဒီအုပ်စု ၃ စု ပြောနေလုပ်နေတဲ့ “အမျိုးသားရေး ဘယ်လဲ ဘာလဲ” ဆိုတာကို ကွင်းခပ်ပြသလို အရှင်း လင်းဆုံး ဖော်ပြလိုက်တဲ့ဖြစ်ရပ်တော့ ရှေ့နေကြီး ဦးကိုနီ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံလိုက်ရတဲ့ဖြစ်ရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် သူတို့ပြောနေတဲ့ “အမျိုးသားရေးနဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံရေး”ထဲမှာ ဘယ်လိုလှုပ်ရှားမှုတွေ ပါဝင်နေသလဲဆိုတာ စူးစမ်း ကြည့်လိုက်တော့
“သီပေါမင်းအုတ်ဂူကို သွားကန်တော့” တာပါတယ်။
သီတဂူဆရာတော်ရဲ့ “၄ ချောင်း ထောက်ဒေသနာ” ပါတယ်။
သင်္ကန်းဝတ် ဝီရသူရဲ့ “တိတ်ပိတ်တရား” ပါတယ်။
“အောင်ဝင်းဇော်၊ အောင်ဝင်းခိုင်၊ ဇေယျာဖြိုး” တို့လို (DSA) ကျောင်းဆင်းဟောင်း စစ်ဗိုလ်ဟောင်းတွေရဲ့“အကြမ်းဖက်လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှု”ပါတယ်။
“ကောလဟလမျိုးစုံ” ဖန်တီးထုတ်လွှင့် နေမှုတွေဟာ ဇာတ်တိုက်ထားသလို၊ အကွက်ချစီစဉ်ထားသလို အုံနဲ့ကျင်းနဲ့ ပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။
အဲဒီလို “အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှုတွေ” ကို “မေတ္တာနဲ့သာအုပ်စိုးမယ်” ဆိုတဲ့ ဒီချုပ်ပါတီအစိုးရက ပီပီပြင်ပြင်ရင်ဆိုင်နိုင်ပါ့ မလားဆိုတာကိုတော့ စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ စိုးရိမ်မိတာအမှန်ပါ။
May 7, 2017 at 6:27 am | Reply
“မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်” ဟူသည် တိုင်းပြည်တစ်ခုခုမှာနေထိုင်ကြသည့် နိုင်ငံသားတိုင်း ထားရှိသင့်သည့် မရှိမဖြစ်စိတ်ဓာတ် တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့သမိုင်းကို လေ့လာကြည့်ပါက နိုင်ငံအချို့သည် ကိုလိုနီနယ်ချဲ့စနစ်၊ ဖက်ဆစ်စနစ်၊ နာဇီစနစ်၊ ဇီယွန်စနစ် စသည့် စနစ်အမျိုးမျိုး အောက်ကို ကျရောက်ခဲ့ရသည်ကို တွေ့ရသည်။
“နေမဝင် အင်ပါယာ” ဟုခေါ်ဝေါ်တင်စားခြင်းခံရသော ကိုလိုနီနယ်ချဲ့စနစ်ကို အင်္ဂလိပ်လူ မျိုးတွေအပြင် ပြင်သစ်၊ပေါ်တူဂီ၊ ဒတ်ခ်ျ လူမျိုးတွေက ကျင့်သုံးခဲ့သည်။ မိမိတို့လက်အောက်ခံ နိုင်ငံ ငယ်လေးများရဲ့ မြေပေါ်၊ မြေအောက်၊ ရေပေါ်၊ ရေအောက်၊ သဘာဝသယံဇာတများကို လိုသလို ထုတ်ယူသုံးစွဲပြီး အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်သည့် စနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဂျပန်တို့၏ဖက်ဆစ်စနစ်ဟူသည် မိမိ တို့သိမ်းပိုက်ခံနိုင်ငံများ၏ သဘာဝသယံဇာတများကိုလည်း စိတ်ကြိုက်ထုတ်ယူသုံးစွဲသည့်အပြင် ထိုနိုင်ငံရှိ ပြည်သူလူထုကို သံသယရှိရင် ရှိသလို ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခြင်း၊ သတ်ဖြတ်ခြင်းပြုသည့် ပြုသည့်အပြင် အမျိုးကောင်း သမီးပျိုလေးများကိုလည်း မိမိတို့စိတ်ဓာတ်ခံစားမှု့အတွက် အဓမ္မပြု ကျင့်သည့်စနစ်ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ နီးပါး ဗြိတိသျှ ကိုလိုနီနယ်ချဲ့ စနစ်အောက်ကို ကျရောက်ခဲ့ သည်။ ထိုကိုလိုနီနယ်ချဲ့အောက်မှ လွတ်မြောက်ရန် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အပါဝင် ရဲဘော်သုံးကျိပ် တို့သည် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ လျိူ့ဝှက်စွာ ထွက်ခွာခဲ့သည်။ ပါးရိုက်ခံ၊ နားရင်းရိုက်ခံ၊ ပင်ပန်းဆင်းရဲခံကာ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ကို အရင်းတည်ကာ သူ့ကျွန်ဘဝမှ လွတ်မြောက်ရေး အတွက် ထားရှိခဲ့သော စိတ် ဓာတ်သည် “မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်” အစစ်ဖြစ်သည်။ ဂျပန်တို့၏ စစ်အင်အားအကူအညီဖြင့် ရဲဘော်သုံး ကျိပ်တို့နှင့်အတူ အသက်သွေး၊ ချွေး ပေးဆပ်ခဲ့ရသော ပြည်သူလူထုကြီးထားရှိခဲ့သော စိတ်ဓာတ် သည်လည်း မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ် အရင်းစင်္စ၊အရင်းခံဖြစ်သည်။ ဗြိတိသျှနယ်ချဲ့ကို တွန်းလှန်ပြီးနောက် ဂျပန်တို့သည် မင်းသားခေါင်းဆောင်ထားသော ဘီလူးရုပ်သဏ္ဍာန်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ဖက်ဆစ်စနစ် ကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်သုံးခဲ့ကြသောကြောင့် မြန်မာပြည်သူလူထုကြီးကို ဖက်ဆစ်စနစ်အောက်မှ ကယ်တင်ရန် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် ဂျပန်၏ရန်သူ ဗြိတိသျှနယ်ချဲ့ကို အောက်ကျခံကာ စစ်ရေး အကူအညီများကို တောင်းခံရတော့သည်။ “ ရန်သူရဲ့ရန်သူသည်၊ ကိုယ့်ရဲ့ မိတ်ဆွေဖြစ်သည်” (The enemy of the enemy is friend ) ဟူသော နိုင်ငံရေး ဖီလောဆိုဖီ (philosophy) ကို ဗိုလ်ချုပ်ကျေညက်ခဲ့ကြောင်း ဤလုပ်ရပ်ကား သက်သေတည်း။
ဗြိတိသျှနယ်ချဲ့နှင့် ဖက်ဆစ်ဂျပန်တို့လက်အောက်မှ လွတ်မြောက်ရန် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြသော ပြည်သူလူထုကြီး ထားရှိခဲ့သော မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်သည် စစ်မှန်သောမျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ဖြစ်သည်။ ဟန်ပြလုပ်စားပြပုံစံ၊ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်မဟုတ်ပေ။ နာဇီစနစ်ကျင့်သုံးခဲ့သည့် ဂျာမဏီခေါင်းဆောင် မှာ ဟစ်တလာဖြစ်သည်။ မိမိလူမျိုးကောင်းစားရေးအတွက်၊ မိမိနှင့်မတူကွဲပြားသော လူမျိုးများကို သုတ်သင်ရှင်းလင်းပစ်ရေး မူဝါဒစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုနာဇီစနစ်၏သားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရသူမှာ ဂျူး လူမျိုးများဖြစ်သည်။ နာဇီခေါင်းဆောင်ဟစ်တလာသည် မိမိ၏နာဇီဝါဒအရ ဂျူးလူမျိုးမြောက်မြားစွာ ကို အခန်းထဲကိုပြွတ်သိပ်ထည့်ကာ အဆိပ်ငွေ့များလွှတ်ကာ သုတ်သင်ရှင်းလင်းဖြစ်ခဲ့သည့် ဆိုးမွေ များကို ကမ္ဘာ့ပြည်သူလူထုကြီးက ရွံရှာမုန်းတီးခဲ့ပေသည်။ ပြစ်တင်ရှုတ်ချခြင်းခံခဲ့ရပါသည်။
“ဇီယွန်” ဝါဒသည် အစ္စရေးနိုင်ငံရှိ ဂျူးလူမျိုးတို့ ယနေ့တိုင်ကျင့်သုံးနေသော စနစ်ဖြစ်သည်။ မိမိလူမျိုး၊မိမိကိုးကွယ်သည့် ဘာသာသည်သာ အမှန်ကန်ဆုံး၊ကြီးကျယ်၊မြင့်မြတ်ဆုံးဟု ယူဆပြီး မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ မိမိတို့ဘာသာထဲသို့ အသစ်ဝင်ရောက်လာခြင်းကို လက်မခံသောစ နစ်ဖြစ်သည်။
ဖော်ပြပါ နယ်ချဲ့စနစ်၊ဖက်ဆစ်စနစ်၊ နာဇီစနစ်၊ဇီယွန်စနစ်များသည် အစွန်းရောက်ဝါဒစနစ် များဖြစ်ကြောင်းကို ကမ္ဘာ့သမိုင်းပညာရှင်များ၊ အတွေးအခေါ်ပညာရှင်များ၊ သုတေသီများက ယနေ့ မျက်မှောက်ခေတ်တွင် မှတ်ကျောက်တင်နေကြပြီဖြစ်သည်။
အစွန်းရောက်ခြင်းသည် အန္တရာယ်ကြီးမားလှသည်။ ( Extremes are dangerous.) ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာသည် လူသားတို့အား “အလယ်အလတ်လမ်းစဉ်” သည်သာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းကို ဟောကြားခဲ့ပါသည်။
မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်မှာ အစွန်းရောက်မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ် သို့မဟုတ် မျက်ကန်းမျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ဖြစ်သည်။ “ငါနှင့်ငါသာ ၊နှိုင်းစရာ။ ငါနှင့်မတူ၊ ငါ့ရန်သူ” ဟူသော အယူအဆဖြစ်သည်။ “ငါ့လူမျိုး၊ငါကိုးကွယ်ယုံကြည်သည့် အယူအဆ၊အတွေးအခေါ်၊ဘာသာ၊သာ သနာ သည်သာ အကောင်းဆုံး အမြတ်ဆုံးဖြစ်သည်ဟု သွေးနထင်တက် ဘဝင်လေဟပ်ကာ၊ အခြားမတူကွဲပြားသောလူမျိုးဘာသာ အယူဝါဒများကို အပြစ်မြင် မုန်းတီး ရန်ရှာနေသော အသိဥာဏ် ဆင်ခြင်တုံတရား ပိတ်လှောင်ခြင်း ခံထားရသော ဝါဒစနစ်ဆိုးတစ်ခုဖြစ်သည်။ အမြင် ကျဉ်းမြောင်းသည့်ဝါဒ ဖြစ်သည်။
ထိုမျက်ကန်းမျိုးချစ် အစွန်းရောက်ဝါဒကို ပညာရေးအခြေခံ နည်းပါးသော၊ဗဟုသုတ ဆင်းရဲသော၊ လူတန်းစားများကို ထိုဝါဒဆိုးမှိုင်းများ အလွယ်တကူ သွတ်သွင်းပေးနိုင်သည်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင် ထိုကဲ့သို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ် အင်အားများပြားလာပါက ထိုနိုင်ငံသည် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု ကင်းဝေးကာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု့ဆုတ်ယုတ်ကာ ကမ္ဘာ့အလယ် ပုံရိပ်ကျဆင်းမျက်နှာငယ်ရမည်မှာ မလွဲဧကန်ပင်ဖြစ်သည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်တွင် ဘာသာရေး၊လူမျိုးရေး၊ အဓိကရုဏ်းများကို စနစ်တကျ နောက်ကွယ်က ဖန်တီးခဲ့သော “လက်မဲကြီးအုပ်စု” သည် ယနေ့တိုင် NLD အရပ်သား အစိုးရ၏ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ် ယိမ်းယိုင်ပျက်စီးအောင် ဥာဏ်နီဥာဏ်နက် မျိုးစုံသုံးကာ စေ့စော်ဖန်တီးလျက်ရှိ သည်။ မတူကွဲပြားဘာသာဝင် လူနည်းစုများ၏ အသက်အိုးအိမ်၊စည်းစိမ်များကို ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ ဘာသာရေးစာသင်ကျောင်းများ၊ ဝတ်ပြုဆောင်များကို ပြဿနာရှာခြင်း၊ ဒေသခံအာဏာပိုင်များကို ဖိအားပေး အကြပ်ကိုင်ကာ တားဆီးပိတ်ပင်စေခြင်း စသည့် ဥပဒေမဲ့လုပ်ရပ်များကို မင်းမဲ့စရိုက်ဆန် ဆန် ပြုလုပ်နေကြပေသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ကြီးအပါအဝင်၊ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များက NLD ရွေးကောက်ပွဲနိုင် အစိုးရအား ကန့်ကွက်၊ပြစ်တင်၊ရှုတ်ချသည် အထိဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။ လက်ရှိအခြေအနေအရ – ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဋ္ဌာနသည် အာဏာရအစိုးရ၏ ပြည်နယ်၊တိုင်း ဝန်ကြီးချုပ်များ၏ အုပ်ချုပ်မှု့အောက်တွင် တိုက်ရိုက်မရှိဘဲ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၏ စီမံကွပ်ကဲမှု အောက်တွင် ရှိနေသောကြောင့် ဆူပူလှုံ့ဆော်သော လူမျိုးရေး၊ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းများ၊ ဖန်တီးနေသူများကို အချိန်နှင့်တပြေး ညီ အရေးမယူနိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု စာရေးသူ ထင်မြင်မိပါသည်။
ထို့ကြောင့်၏လည်း “အမျိုးဂုဏ်၊ဇာတိဂုဏ် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့လို့ပဲ ပြောပြော၊ အမျိုးဘာသာ၊သာသနာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့လို့ပဲပြောပြော အများကြားကောင်းအောင် ဖွဲ့စည်းထားသော မျိုးချစ်မာန်ပြ အဖွဲ့အစည်းများသည် “ အသိကိုတမံ ဥာဏ်ကို ခြေကတုတ်ပြု” ၍ မိမိတိ်ု့လုပ်ရပ်များကို စစ်တမ်းထုတ်လေ့လာကြည့်ပါက ရှက်ဖွယ်လိလိ ဖြစ်သည်ကိုသာ တွေ့ရပေလိမ့်မည်။ မိမိတို့လုပ်ရပ်ကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းပေ မည်။
နောက်ကွယ်က လက်မဲကြီးအုပ်စုသည် ယနေ့တိုင် အရေးယူခြင်းမခံရသေးဘဲ မျက်ကန်းမျိုးချစ်များကို မွေးကာ နောက်ကွယ်မှ လိုသလိုကြိုးဆွဲကာ ကပြစေလျက်ရှိသည် ကို နိုင်ငံရေးအမြင်ရှိသော ပြည်သူလူထုကြီးသည် ကွင်းကွင်းကွက်ကွက် နားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ ထိုသူတို့၏ လုပ်ရပ်ဆိုးများက သမိုင်းသက်သေတည်း။
မျိုးချစ်အမည်ခံ လူ့ဗလာ၊ဖိုးသုည များကို မန္တလေးမြို့မှ ဆရာ ဦးဘုန်း(ဓာတု)က “ ကိုယ့်လူမျိုးမဟုတ်တဲ့ အခြားလူမျိုးတွေကို မုန်းတီးနေတာ သူတို့၏ အကျိုးစီးပွားပျက်ဆီးအောင် ကြံစည်ပြောဆို လုပ်ကိုင်နေတာတွေဟာ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်လုံးဝ မဟုတ်ဘူး။ အဲ့ဒါ လူမျိုးရေး၊မုန်းတီးစိတ်သာဖြစ်တယ်။ မျိုးချစ်စိတ်ဆိုတာ ကိုယ့်တစ်မျိုသားလုံးရဲ့ လူနေမှု့အဆင့်အတန်း၊ တိုးတက်မြင့်မားဖို့ အတွက် မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းသာ ဖြစ်တယ်” လို့ ဟောပြောပွဲတစ်ခုတွင် ဟောကြားခဲ့ဖူးပါသည်။ ထို့အပြင် မတူကွဲပြားလူသားများအား အပြစ်မြင်တတ်သည့် စိတ်ဓာတ်သည် “ ဗုဒ္ဓ၏ ဆန္ဒ၊ ဗုဒ္ဓ၏ဝါဒ မဟုတ်ကြောင်း ကို စာရေးသူလေ့လာဖူးပါသည်။ ဗုဒ္ဓဝါဒသည် လူသားဝါဒဖြစ်ပါသည်။ လူသားပီသ သူများထံတွင် လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး ခွဲခြားမှု့လုံးဝမရှိကြောင်း သမိုင်းက သက်သေခံနေပါသည်။
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စသည်တို့သည် ထိုနိုင်ငံ၏ အစိုးရများက လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစားလိုက်နာခြင်း၊တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့ကို အပြည့်အဝဆောင်ရွက်ခြင်း စသည်တို့အပေါ်တွင် တည်မှီနေပေသည်။
အချုပ်ဖြင့်ဆိုရလျှင် “ပြည်သူနှင့်အတူ လက်တွဲပူးပေါင်း လိုသော ပြည်သူ့ အစိုးရသည် ပြည်သူလူထု၏ ဆန္ဒဖြစ်သော မကောင်းသူကို မကောင်းသလို ပြတ်ပြတ်သားသား ဥပဒေအရ အရေးယူဖို့ အချိန်တန်ပြီ။ မည်သူ့ကိုမျှ ငဲ့ညှာမနေဘဲ တိုင်းပြည်အကျိုး၊ပြည်သူ့အကျိုးကို ရှေ့ရှုကာ အကောင်းအဆိုးကို ပြည်သူလူထုအား ချပြကာ၊ အသိပေးကာ၊ပြည်သူ့အသံတို့ကို နားထောင်ဖို့ အမြန်လိုနေပြီ” ဟု စာရေးသူ သုံးသပ်မိသည်။ သမ္မတ ဥိးသိန်းစိန်လက်ထက်က ဖော်ထုတ်အရေးယူခြင်းမရှိသော လက်မဲကြီးအုပ်စုနှင့် အပေါင်းအပါတစ်စုသည် ပြည်သူ့အစိုးရနှင့် ပြည်သူလူထုကြီးကို ဟန့်တားနှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးနေပါက ဥပဒေအရ အရေးယူဖို့ လိုနေပြီဖြစ်ပါကြောင်း ပြည်သူနှင့်အတူ ပြည်သူ့အစိုးရအား အကြံပြုလိုက်ပါတော့သည်။
April 8, 2019 at 7:51 am | Reply
We, Myanmar Muslims haveaVERY POWERFUL WEAPON to STOP the repeat of USDP’s use of HATE SPEECHES and Anti-Myanmar Muslim RIOTS to intimidate NLD that turned NLD into eunuch and dare not defend the sufferings of Myanmar Muslims.
THAT IS the THREAT OF PROSECUTION @ ICC to anyone: Activists, NGOs, Political parties, Journalist, Cartoonist etc.
We need to warn them not to repeat the same old tactics of Hate Mongering and creating the racial-religious riots against us.
Not only openly threaten them, but also record all their speeches, prints, pictures, cartoons, videos etc for ICC to prosecute the culprits.
April 8, 2019 at 7:53 am | Reply